Xildhibaan Jeesow “Korneel Macow dilkiisa ciidamo dowadda katirsan ayaa ka dambeeyay waana in la baaraa” – Kalfadhi
Xildhibaan Jeesow “Korneel Macow dilkiisa ciidamo dowadda katirsan ayaa ka dambeeyay waana in la baaraa”
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa Kalfadhi u sheegay in Askar katirsan Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya loo soo qabtay dilkii Taliyaha Qeybta Guud ee Booliiska Gobalka Hiiraan.
Xildhibaan Jeesow ayaa dalbaday in si dhab ah loo baaro dilkaas iyo cidda amartay ciidamadii ka dambeeyay falkaasi oo uu ku tilmaamay mid kheyral mas’uuliyadnimo ah.
“Waxaan dalbanayaa in si dhab ah loo baaro kiiskaan oo hadda loo soo qabtay Askar katirsan Ciidamada Nabad Sugidda Soomaaliya” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen Baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Hirshabeelle iyo guddiga uu magacaabay Madaxweynaha Soomaaliya uu rajo weyn ka qabo in ay si dhab ah u baaraan kiiska dhacay.
“Guddiga aan magacaawnay iyo kan Madaxweynaha ee uu hogaamiye Gen Bashiir Goobe waxaan ugu baaqayaa in warbixin lagu qanco oo dhab ah laga keeno falkii ka dhacay kalabeyr” ayuu yiri Daahir Amiin Jeesow oo la hadlay Kalfadhi.
Dhamaan dhinacyada isku howlay qaboojinta xiisadda kataagan magaalada Beladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan ayuu kula taliyay in ay ka shaqeeyaan sidii loo baajin lahaa dil ama dagaal dambe oo ka dhaca gobalka Hiiraan.
“Gobalka Hiiraan waxa uu qabaa dhibaatooyin u gaar ah, waxaan ku talanayaa in aan looga sii darin” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Yuusuf Garaad “Cabburin saxaafadeed waa ay daahin kartaa laakiin ma baajin karto faafidda xogta iyo xanta
Yuusuf Garaad "Cabburin saxaafadeed waa ay daahin kartaa laakiin ma baajin karto faafidda xogta iyo xanta